Manii Murtii Federaalaa Itoophiyaa waan artisti Oliyaadi Baqqalaa, Seenaa Solomoonii fi miilota isaanii 7n himatan boritti beellame
Sadaasaa 01, 2017
Mana Murtii Federaala Itoophiyaa
Artisoota Itoophiyaa 7n biyya nagaa dhowwuun himatan dubbii isaanii boritti beellaman
Oliyaad Baqqalaa,Seenaa Solomoon,Mooybil Misgaanuu, Qananii Taammiruu, Ifaa Gammachuu,Baahiluu Simaachoo fi Eliyaas Kifluu fa ganna 1 fi wayiin duratti abbaan alangaa addaa Itoophiyaa himatee biyya nagaa dhowwan jedhanii hidhan.
Jara kana keessaa ijoollee dubraa lamaan artisiti Seenaa Solomonii fi artisti Qananii Taammiruu Qaallittiitti jiran.
Jarii dhiiraa shanan ammoo Qilinxoo jira.Warrii cuftii ta kalee waliin marroo sadii beellamaaf mana murtii dhufee waan himataniin caqafate.
Manii Murtii beellama kalee silaa yaada abbaana alangaa addaatii fi abukaatoon isaanii irratti wal falaman caqasee murtii kennuuf beellame.
Taatullee abukaatoon jara kanaa lamaan obboo Wondimmuu Ibsaatii fi obboo Tolamaariyaam Margaa yaada murtii abbaa alangaa addaa irraa qaban akka galmee tokko irratti dhiyeeffatan hajaje.
Jara kana keessaa Eeliyaasa Kifluu dhiba qabaa wayaa oowwituu keeyyachuu male. Fayyaalee mitii horuma ufiitiin mana akimi dhaqee wallaanachu fedha manii murtiilleen tanumaaf jedhee akka wannii innii gaafate guutamtuuf gaafatee taatullee hajajii mana murtii sun akka abukaatoon isaa obboo Tolamaariyaam Margaa jedhutti hin guutamneef.
Akka obboo Tolaamariyaam abukaatoon jara kanaa Ifaa Gammachuu maqeeffatee jedhetti bisaan warrii dhugu booruu, cirracha qaban tana qofaa mitii waan hmamaatuu dhibiillee hedduu qaba.Tana malee firaashii cinaacha nama tokko qofa qabattu senimetirii 80 lamaan irra bulan.
Manii murtii ammoo akka waan himatan kana barreeffamnaan dhiyeeffatan hajaje.Ijoolleen dubraa lamaalleen akka abukaatoon isaanii jedhutti duruu rakkoo akka akkaa himachaa bahan.Fkn maatii isaanii akka fedhanitti dubbisuu dhowwuu fa.
Woma taateefuu manii murtii olaanaa federal Itoophiyaa dubbii isaanii bori itti deebi’a.